Ampidino uTorrent ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (2.29 MB)
uTorrent dia miavaka aminny mpanjifa falehan-driaka mandroso ahafahanao misintona maimaimpoana ny renirano aminny solosainao. Iray aminireo rindrambaiko malaza indrindra eo aminny mpanjifa Bittorrent, aleonao koa ny uTorrent satria loharano misokatra.
Miaraka aminny interface tsotra tsotra ampiasaina, habenny rakitra kely, fametrahana mora ary endri-javatra mandroso hafa, ny rindrambaiko izay misongadina eo aminireo programa torrent maro eny an-tsena dia tsy isalasalana fa ny torrent downloader be mpampiasa indrindra eranizao tontolo izao.
Miaraka aminny uTorrent, izay ahafahanao misintona rakitra marobe maromaro miaraka aminizay, azonao atao ny manefy mora foana hoe ohatrinona ny fantsom-pifandraisana tianao hampiasaina aminny fisintomana anao aminny alàlanny fanamafisana ny fifandraisana Internet arakizay tadiavinao. Aminizany fomba izany dia afaka manohy mivezivezy aminny Internet ianao rehefa misintona riaka.
Ny programa fampidinana torrent, izay misy fanakatonana mandeha ho azy, fampidinana an-tsokosoko, fikarohana torrent, fanaraha-maso mandritra ny fampidinana, fanitsiana fantsom-pifandraisana ary fiarovana azo antoka, dia mampiasa ny loharanon-tsolosainao aminny ambaratonga faranizay kely indrindra ihany koa. Noho izany, ny solosainanao dia tsy miteraka fikorontanana na fianjerana mandritra ny fisintomana rakitra.
Raha mila mpanjifa Bittorrent maimaim-poana sy mandroso ianao hisintona rakitra miaraka aminny extension .torrent, azonao atao ny manomboka mampiasa uTorrent aminny alàlanny fampidinana izany aminny solosainao nefa tsy mieritreritra.
Ahoana no hanafainganana anao uTorrent?
Ny isanny loharano, ny fanelingelenana WiFi, ny dikan-uTorrent, ny haingam-pifandraisana ary ny fikirana laharam-pahamehana dia misy fiantraikany aminny hafainganam-pandehanny fisintomana rakitra Ka ahoana ny hanafainganana ny tondra-drano? fomba fampidinana haingana ny riaka Ireto ny teboka ilainao hitandremana mba hanafainganana uTorrent sy hisintomana haingana ireo rakitra falehan-driaka;
Zahao ny fanisana loharano anny rakitra torrent: ampiasaina ny loharano ho anireo izay manohy mizara ilay rakitra aorianny fisintomana azy. Arakaraka ny maha loharanom-pahalalana no mahamaika kokoa ny fampidinana. Miezaha misintona ny fisintomana falehan-driaka avy aminny tracker miaraka amina loharano betsaka araka izay azo atao.
Ampifandraiso mivantana aminny modem / router ny solosainao fa tsy ny fifandraisana WiFi: famantarana maro ao an-trano no mety hanelingelina ny fifandraisanny tamba-jotra tsy misy tariby aminao; hisy fiatraikany aminny hafainganam-pandehanny uTorrent ary koa ny hafaingananny Internet.
Zahao ireo toe-javatra filaharana uTorrent: Ny rakitra rehetra alainao aminny uTorrent dia mampiasa bandwidth kely. Rehefa misintona haingana indrindra ny rakitra maro dia lava kokoa ny fotoana fampidinana ireo rakitra. Miezaha misintona tsirairay ny fisie. Eo ambaninny safidy - Preferensi - Ny filaharana filaharana dia mamaritra ny isa farafahakeliny ho anny fisintomana mavitrika ho 1. Ampidiro ihany koa ny sarintany uPnP port. Ity dia hiantoka fa tsy hianjera aminny firewall uTorrent ianao ary mifandray mivantana aminireo loharano. Azonao atao ny miditra aminny toerana misy anao ao ambaninny Safidy - Preferensi - Fifandraisana.
Hamarino tsara fa mampiasa ny kinova farany anny uTorrent ianao: zahao ireo fanavaozana tsy tapaka. Azonao atao ny manamarina raha misy kinova vaovao azo alaina ao ambaninny fanampiana - Zahao ireo fanavaozana.
Manampia mpanaraka hafa: ny fanananao loharanom-pahalalana bebe kokoa anny tracker dia hampitombo ny hafainganam-pandehanny torrent.
Ovao ny hafainganam-pandeha: Ampidiro ny 0 ho sanda haingam-pandeha Maximum (Avo indrindra) ho hitanao rehefa tsindrio ny fisintomana. Elaela vao hitombo ny hafainganam-pandeha, fa hisy kosa ny fitomboanny hafainganam-pandeha raha oharina aminilay teo aloha.
Alao antoka fa laharam-pahamehana ny uTorrent: Tsindrio Ctrl + Alt + Del na Ctrl + Shift + Esc hanokatra ny Task Manager ary kitiho ny Start. Mitadiava uTorrent eo ambaninny Processes ary tsindrio havanana eo amboniny ary mandehana aminny antsipiriany - Mametraha laharam-pahamehana - Avo.
Zahao ireo toe-javatra mandroso: Voalohany, eo ambaninny Safidy - Preferensi - Advanced - Disk Cache, zahao ilay boaty Ampidino ho azy ny habenny fahatsiarovan-tena ary apetraho aminny tanana ny habeny ary apetraho aminny 1800. Faharoa, eo ambaninny Safidy - Preferensi - Bandwidth, apetraho aminny 500 ny isa farafahakeliny ho anny mpiara-mianatra.
Force start torrenting: Mba hanafainganana ny fampidinana, kitiho ankavanana ny fisandratana rehefa avy eo fidio ny Force Start. Tsindrio havanana indray ny torrent ary apetaho aminny avo ny asanny Bandwidth.
Haben'ny rakitra: 2.29 MB